Fahafatesana ankoatra ny covid-19: nomena alalana ny fahafahana mitondra razana any amin’ny faritra | NewsMada
Fahafatesana ankoatra ny covid-19: nomena alalana ny fahafahana mitondra razana any amin’ny faritra
Par Taratra sur 10/06/2021
Anisan’ny nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra, omaly teny Iavoloha ny fahafahana mitondra ny razana any amin’ny faritra. « Napetraka any amin’ny efitra mangatsiaka « chambre froide » teny anivon’ny hopitaly eto Antananarivo ny razan’ireo olona sasany avy any amin’ny faritra nodimandry teto Antananarivo. Maro anefa ireo fianakavian’ny maty mikasa ny hitondra ny razana tsy matin’ny covid-19 any amin’ny faritra koa omena alalana izy ireo », hoy ny tatitra. Na izany aza anefa, misy ny fepetra napetraky ny fanjakana, amin’ny alalan’ny polisim-pirenena fitakina taratasy fanamarinana ny fahafatesana avy amin’ny BMH, miampy ny taratasin’ny dokotera nitsabo.
Fisorohana ny hosoka
Ny fanamarinana avy amin’ny BMH hatrany, na vokatry ny areti-mifindra na tsia ny nahafaty azy na koa mifandray na tsia amin’ny covid-19 koa izany teo aloha. Manampy izany ny fanomezan-dalana momba ny fandefasana ny razana avy any amin’ny delegen’ny boriborintany. Notsiahivina amin’izany koa ny taratasy milaza ny anaran’ny hopitaly nitsaboana ilay maty ka ho entina any amin’ny faritra ny razana. « Entanina ny lehiben’ny hopitaly hanome ny lisitry ireo matin’ny covid-19 hampidirina anaty rindram-baikon’ny solosaina. Jerena koa ny momba ny vatapaty itondrana ny razana. Hisorohana ny mety ho hosoka ny anton’izany rehetra izany. Iharan’ny sazy ireo manao hosoka », hoy ny tatitra.
Fametrahana ny faritra faha-23
Etsy andaniny, nankatoavina ny volavolan-dalàna hametrahana ny faritra faha-23 rehefa nasiam-panitsiana momba ny ho enti-manana eny anivon’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny fikarakarana ny fifidianana ary ny fampihodinana sy ny anjara asan’ireo rantsa-mangaikan’izy ireo indrindra ahafahana mametraka ny faritra faha-23.
Araka izany, tsy ho ela intsony ny hisarahan’ny faritra Vatovavy sy i Fitovinany. Na izany aza mbola adihevitra be io eo anivon’ny Antenimiera.